Oge a Google hapụrụ "XL" n'ụlọ mgbe ịmebata Pixel 4 | Gam akporosis
Google weputara Pixel 4 na oganihu na foto, Ihe nlere Soli na odighi “XL”
Anyị na-eche ụbọchị Google gosipụtara Pixel 4 Maka ihe kariri ihe doro anya: ihe nnukwu G nwere ike iji anya m abụọ mee ihe niile na nchekwa foto. Anyị na-ekwu nke a n'ihi na Pixel 2 bụ tupu na mgbe ese foto site na ngwanrọ; n'ezie enwere ọtụtụ ụdị nke Gcam nwere ike itinye ya na ntanetị gam akporo dị iche iche.
Taa ka emepụtara Pixel 4 dị ka ịga n'ihu nke Pixel 3 gara aga na na ihe ijuanya nke enweghị ụdị «XL» n'afọ a. Ọ bụ ezie na ee, anyị anaghị eche ihu igwe ihu na ọnụahịa dị elu nke anyị na-ahụ na Samsung ma ọ bụ Apple. Google chọrọ ka ekwentị ya dị ọnụ ala ma ghara ịgafe euro 859 na Europe na ụdị 128GB ya. Ka anyị hụ ihe Google wetara anyị nke ọhụrụ Pixel 4 na 4Xl.
1 Pixel 4 na Project Soli
2 Onye enyemaka Google ọhụrụ, ọsọ na amamịghe
3 Foto di na Pixel 4
4 Pixel 4 nkọwapụta nkọwapụta
Pixel 4 na Project Soli
Ihe mbu na - eme anyi mgbe anyi na - ele Google igwe bu na Pixel ejiri uche mee na sọftụwia ahụ; n'ezie Google Assistant bụ otu n'ime anyụike nke ekwentị ndị ọzọ yana akụrụngwa ya na-agbagharị.
Google tozuru oke na ọ dị n'ihu safkpọghe nke kacha dịrị gị mma taa site na Project Soli nakwa na ọ bụ ọrụ nke afọ nke etinyere na nke mbụ ya na ekwentị Google. N'ezie, akụkụ mbụ nke ngosi a bụ maka ikike anwansị iji aka mkpịsị aka na aka ekele ndị sensọ 4.
Ihe n'azụ Project Soli bụ na ị nwere ike soro mkpanaka gị na-emekọrịta ihe n’ụzọ ọhụrụ, M na-ekwu n'aka gị. Ọ bụ ezie na anyị ahụlarị atụmatụ ndị gara aga dị ka nke LG afọ gara aga, ọ dị ka nnukwu G karịrị obi ike na ihe mmetụta nke Project Soli ga-enwe ike ịiche ọdịiche dị iche iche nke mmegharị nwere ike iduhie. M pụtara, ha na-ekwukwa banyere anwansi ọzọ.
Onye enyemaka Google ọhụrụ, ọsọ na amamịghe
Eziokwu bu ihu ohuru Google Assistant na-aghọta ngwa ngwa nke onye na-eweta ihe dị na isi okwu Na otu esi arụ ọrụ dị ka ọ dị ka ezigara ya, ọ bụrụla ahụmahụ ị ga-ewere onye enyemaka Google gaa ọkwa ọzọ.
Oge a nnukwu G chọkwara mesie nzuzo ike site na ịnye anyị iwu ka ọ bụrụ Google Assistant na enye anyị ohere ihichapu na olu nke anyị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nzuzo bụ otu n'ime isi ihe dị na Pixel 4.
Emeela ya ihe ndekọ ọhụrụ, nke anyị maraworị ma mara ịdị adị ya, mana ọ bụrụla Google n'onwe ya gosipụtara ya n'ụzọ zuru oke na ịtụnanya nke ọha na eze dị na isi okwu ahụ.
Foto di na Pixel 4
La foto nyocha ọzọ dị na Pixel 4 na maka nke a Google ahapụla ohere nke nkeji ole na ole iji kwuo banyere ya. Kwuo banyere isiokwu, ọkụ, anya m na sọftụwia gị iji kọwaa etu otu ihe ndị a si dị mkpa. A chọrọ foto nyocha maka sọftụwia ahụ. Nọmalị ọ bụ iji jikota foto dị iche iche ka ị nweta ihe kachasị mma. Site na ijikọ ọnụ rue foto 9, anyị nwere ike ịhụ foto ndị ahụ HDR.
Anya m dị mkpa karịa. Na Pixel 4 nwere Super Res Zoom ekele ya na ihe mmetụta anya ya maka nnukwu foto. Igwe foto Macro na Pixel 4 anaghị “egbutu” foto iji buo ibu, mana ọ na-edekọta ya. Ọ bụ ụzọ iji mee iji nwee foto kachasị mma mgbe anyị ji atụmatụ mbugharị.
Ha na-ekwu maka Live HDR +. Ha see foto n’ime ya nke window “n’ọkụ” site n’ọkụ na n’ime ya Live HDR + na-elekọta ide ya nke mere na nhazi ya bu ihe okike. N'ebe a, ọ na-akpọrọ anyị gaa na "Njikwa Ngosipụta ugboro abụọ" na nke ahụ na-enye anyị ohere ịnwe njikwa abụọ iji gbanwee ọkụ nke ebe ahụ, otu maka ọkụ na nke ọzọ maka ndò.
Se mma Ọnọdụ Eserese na Pixel 4. N'ihi nhazi igwefoto azụ abụọ, enwere ike ịmepụta ihe ka mma iji kewaa onye mbụ isiokwu na ndabere. - +
Dị ka anyị na-ahụ mmezi na Mgbanwe Night, Google night mode na that inaugurated a ugbu a na-emekarị nke onye ọ bụla na-eweta ha n'abalị ụdịdị ka ha igwe. N'ezie, ọ na-egosi foto ahụ nke igwe abalị iji tuo ọnụ.
Pixel 4 nkọwapụta nkọwapụta
5,7-inch na-agbanwe agbanwe OLED ihuenyo na FullHD + mkpebi na 90Hz.
Snapdragon 855 Pixel Neural Core Mgbawa
Nchekwa na ụdị abụọ: 64GB na 128GB.
Igwefoto azụ azụ 16MP + 12mMP nwere mbugharị anya 1.8x na Dual OIS
Igwefoto n'ihu 8MP nwere oke nkuku.
Batrị 2.800 mAh nke nwere 18w ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ.
Njikọta: LTE Cat18, Wifi ac, Bluetooth 5.0, NFC na ụdị USB-C.
IP68 nchedo, Sense Motion na ihuenyo mkpịsị aka na-agụ.
Akụkụ: 147,05 x 68,8 x 8,2mm
Ahịa: 64GB maka € 759 na 128GB maka € 859.
Anyị agbapụla na ụdị XL ahụ ma nke ahụ bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke ihe omume ahụ. Ya mere ihe niile dị na Pixel 4 na ọnụahịa ahụ gbanwere nke ọma inwe otu mobiles nwere foto kacha mma; ọ bụ ezie na ụdị 128GB maka euro 859, mgbe anyị nwere S10 + ma ọ bụ Rịba ama 10 +. Ugbu a, anyị ga-echere ihe atụ ya iji lelee ọdịiche dị na Pixel 3 site na afọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google weputara Pixel 4 na oganihu na foto, Ihe nlere Soli na odighi “XL”
The dandy nke dandies laghachiri ọzọ na-enweta ume ezumike Oge Suit Larry: Reloaded
Pixelbook Go, Chromebook ọhụrụ nke Google chọrọ iguzo n’elu Mkpa